Iyo malqacad - Shiinaha Shandong Huaxin Electric foorno
Waxaan bixiya kala duwan duurjoogta ah ee awoodda iyo malqacad aad ka 0.3ton in 90ton, waxaan sidoo kale sameeyo malqacadood oo ku salaysan shuruudaha macmiilka. 1.Product Description All malqacadood oo macdantu waxaa lagu wareejin karaa shirka marsho motor for wareeg ku shaqeeya ah. xawaare wareeg wuxuu noqon karaa qabsadaan shuruudaha macaamiisha ee. Codsiga of Casting iyo malqacad biraha macdantu iyo malqacad Hot hawlgalka loo shubay macdantu, ka dib markii sameeyo dareere birta hore ee foornada, u soo dir meel model shubay ah u daadinno, by dri ku ...
Waxaan bixiya kala duwan duurjoogta ah ee awoodda iyo malqacad aad ka 0.3ton in 90ton, waxaan sidoo kale sameeyo malqacadood oo ku salaysan shuruudaha macmiilka.
All malqacadood oo macdantu waxaa lagu wareejin karaa shirka marsho motor for wareeg ku shaqeeya ah. xawaare wareeg wuxuu noqon karaa qabsadaan shuruudaha macaamiisha ee.
Codsiga of Casting macdantu iyo malqacad
iyo malqacad biraha Hot hawlgalka loo shubay macdantu, ka dib markii sameeyo dareere birta hore ee foornada, u soo dir meel model shubay ah u daadinno, by baabuur-wadidda ah.
Iyo malqacad for warshad steelmaking, macdantu in foornada dabka ah oo meesheeda dabka furan, foornada ama Converter steel la shubay, iyagoo hawlgal ka hor ballanqaad.
The malqacadood oo dahab la shubay bir ah kala qaybsan yihiin marawaxadaha laba-jid Rotary gudbinta iyo marsho si toos ah la isugu gudbiyo is-quful nooca laba nooc (1:72, 1 ratio: 75) .Waxaa qaababka ugu muhiimsan waxay kala yihiin: design xarunta Rotary waa macquul, labada-dhinac karo sidoo kale, aasaasiga ah reset.Turbine laba-jid Rotary nooca gudbinta ansixiyeen gudbinta xigeenka marawaxadaha labada-dhinac, la isugu gudbiyo oo siman, hawlgalka ku haboon, consistency.Straight laba-jid wanaagsan ka qodaa gudbinta marsho qufulka ansixiyeen nooca sare, heerarka double ee khilaaf gacanta, qaab is-quful waa xoog badan yahay, miisaanka yar si xor ah, waxaa lagu dhex tuuri kartaa xoog dibadda yar, ku soo laabto si dhaqso ah, ma kowtow, isticmaalka ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo.
2. Feature ee ku ridaya iyo malqacad birta
1) .Reasonable dooro rugta wareeg ah, qalliin ku haboon, aasaasiga ah sii xumayn karaa marka shubtay la dhammeeyo.
2) .Adopt wheel dixirigoodu labada ciyaaryahan baahida double saarka transmission.Although waa heer sare ah, laakiin gudbinta dabacsan, laba-jid karo.
3) .Enclosure laga sameeyey oo saxan bir dhumuc weyn, hoose ee qaab-dhismeedka bacda by dhaqmaadka isku dhafan ee gabogabaysmo, qar hoose, alxanka caymiska xaafuun, taas oo kordhin nolosha adeegga, iyo in la xaqiijiyo ammaanka wadaha.
3. xuduudaheedu Technical
Previous: foornada isbedel ku biiro
Next: Pneumatic foornada Dhismaha Machine
foornada isbedel ku biiro
Electric foornada Dhismaha Machine